Archive du 24-févr-2022
Raharaham-pirenena Mikorontana tanteraka ny Fanjakana
Fahamatorana ara-pitantanana tsy misy, fitoniana tsy mipetraka, fampandrosoana sadasada ny laharam-pahamehana, programam-panjakana misavoamboana sy tsymisy famatsiam-bola
Lozam-pifamoivoizana Be loatra ny maty sy maratra
Lozam-pifamoivoizana roa no indray niseho teto an-drenivohitra omaly alarobia 23 febroary. Tapaka hisatra ilay fiara fitateram-bahoaka zotra faha 183 rehefa nivoaka ny tionelina Ambohidahy omaly maraina tokony ho tamin’ny 8ora sy sasany teo.
Diaspora homena zo hifidy Natao ho an’ny any Eoropa ihany angaha?
Namoaka fampahafantarana ho an’ireo mpila ravinahitra na Diaspora Malagasy ao France, Espagne, Saint Siège,, Israël, Monaco,
Famonjena ny fizahantany Hisokatra amin'ny 5 martsa y sisintany
Nanao antso avo mba hanokafana fanokafana tanteraka ny sisin-tany ny Vondron’ireo orinasa tsy miankina ahitana ny Kaonfederasionin’ny fizahantany, GEM (Groupement des Entreprises de Madagascar), FIV. MPA. MA
Andry Rajoelina Mangataka famoahana famatsiam-bola hatrany
Nisy omaly ny Fihaonan’ny Filoha Andry sy Rtoa Idah Z. Pswarayi-Riddihough, Talen’ny Fandraharahana "Directrice des opérations"
Antoko politika Teza “Miady an-trano ny fitondrana mafia”
Ny vinan’ingahy Rajoelina ny hoe : “Initiative pour l’émergence de Madagascar” dia tsy inona akory fa “Initiative pour l’émergence des mafieux”,
Fanjakana sy orinasam-pianankaviana Ny nanenjehana an-dRavalo no miverina ?
Iny efa navoakan’ny fitsarana momba ny kaonty na « cour des comptes » iny tatitra andiany voalohany mikasika tamin’ny fitantanana ny fanampiana ara-bola tamin’ny covid-19 ny taona 2020.
Mpampianatra EPS “Esory Ratsivahiny fa tsy mendrika”
Tsy mbola tapitra hatreo ny raharaha momba ny fifamaliana teo amin’i Dadan’i Brayan na Depiote Andry Ratsivahiny sy ilay mpampianatra taranja ara-panatanjahantena (EPS) Ramose Njara na Randriamanendrika Anjarasoa.
Fanomezana ho an’ny olon-tiana Betsaka ny azo hatolotra sy amin’ny vidiny mirary
Mbola fotoana mahamety tsara ny fanolorana fanomezana ho an’ny olon-tiana izao noho ny fankalazana ny fetin’ny mpifankatia tamin’ny 14 Febroary lasa teo.
Laza Razafiarison “Andao isika hanomana ny hitondrana ny firenena”
Miha sahirana ihany ny firenentsika, hoy ny mpanao politika, Laza Razafiarison. Tsy haiko, hoy izy, raha mbola misy afaka milaza fa tsy sahirana.
Antehiroka-Talatamaty Fako 24-30 taonina isan’andro no haodina
Ao Andramiarana raha araka ny fantatra no hananganana ilay toerana fanodinana fako iraisana ho an’ny kaominina Ambohibao Antehiroka sy Talatamaty anisan’ireo kaominina 2 amin’ny 3 voafidin’ny Ministeran’ny tontolo iainana
BLOCKCHAIN MADAGASCAR Hatsangana any amin’ny Faritra SAVA
Sambava, Andapa, Vohemar, ary Antalaha no isan’ireo faritra efa nanganana ny Blcokchain Madagasikara izay sehatra hifaneraseran’ireo tanora Malagasy. Fifanomezan-tanana ireo tanora hiantsehatra amin’ny tohivakan-karena
Fandrodanana ny tranony Nalaheo mafy ny Jeneraly Tsaranazy
Nitondra fanazavana ny Jeneraly Tsaranazy Jean Emile omaly taorian’ny fandrodanana ny tranony etsy Ampasapito ny talata lasa teo.
Pasitera Heritiana Mety kapoka avy amin’Andriamanitra izao
Ankoatra ny maha-loza voajanahary azy dia mety ho fanairan’Andriamanitra ny olona mba hitodika sy hivavaka Aminy ihany koa ny fisian’ny rivo-doza mandalo
ADY AMIN’NY PESTA “Arovava-orona sy famonoana voalavo no vahaolana”
Olona miisa 10 mahery indray no fantatra fa matin’ny Pesta aretin-tratra tany amin’ny distrikan’i Fenoarivobe, Faritra Bongolava andro vitsy lasa izay.
Fikambanana Donnons Nous La Main Nanampy ny zaza kambotin’ny zandary
Manampy hatrany ireo fikambanana miahy zaza kamboty sy ireo fianakaviana sahirana amin’ny alalan’ny asa sosialy ny fikambanana Donnons Nous La Main, izay tarihan-dRamatoa Samirah.
Gerard Ramamimampionona “Lasa fitaovana ifamotehana ny tambazotra…”
Toy ny fitaovana rehetra eo am-pelantanan’olombelona ny fitaovan-tserasera, hoy ny filoha lefitry ny Filankevitry ny fampihavanana Malagasy, Gerard Ramamimampionona.
Sarotsaro-piterahana indray ny fikitihana na fanovana na famenoana ireo toerana banga ao anatin’ny governemanta. Omaly no re fa saika hanaovana izany, saingy toa miandry an’Ambatobevohoka ho teraka indray angamba e !